In Sibxashadii Steven Gerard Ee Shan Sano Ka Hor Ayna Iyaga Saamayn Ku Yeelan, In Kulamada Kooxdiisa Liverpool Oo Kaliya Ay Diirada Saarayaan Iyo Virgil Van Dijk Oo Saxaafada Dareenkiisa Kala Hadlay. - GOOL24.NET
In Sibxashadii Steven Gerard Ee Shan Sano Ka Hor Ayna Iyaga Saamayn Ku Yeelan, In Kulamada Kooxdiisa Liverpool Oo Kaliya Ay Diirada Saarayaan Iyo Virgil Van Dijk Oo Saxaafada Dareenkiisa Kala Hadlay.
Difaaca dhexe ee kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk ayaa sheegay in waxa kaliya ee ay kooxdiisa Reds diirada saaraysaa uu yahay in ay badiso kulamadeeda Premier league baaqi uga ah wuxuuna sidoo kale ka hadlay sibxashadii Steven Gerard ee shan sano ka hor kulankii Chelsea iyo sida ay xaaladu uga duwanayd kulankii ay Chelsea garaaceen.
Virgil Van Dijk ayaa kooxdiisa Liverpool ka caawiyay in ay kulankii 18 aad ee Premier league ah ay shabaq nadiif ah garoonka kala baxeen waana kooxda ugu horaysay rekoodhkan ee xili ciyaareedkan looga diwaan galiyay Premier league.
Goolhaye Alisson Becker ayaa caawin badan oo uu ka helay Virgil Van Dijk iyo difaacyada kale ee kooxdiisa Liverpool waxay ka caawinaysaa in uu ku guulaysan doono abaal marinta goolhayaha ugu fiican Premier league ee xili ciyaareedkan.
Virgil Van Dijk oo ka hadlaya sibxashadii Steven Gerard ee shan sanadood ka hor iyo sida ayna kooxdiisa Reds wax saamayn ugu yeelan ayaa yidhi: “Shan sanadood ka hor maanta wax micno ah may lahayn, way soo dhacday, qof kastaaba wuu niyadjabsanaa, laakiin maanta waxay ahayd ciyaar gabi ahaanba ka duwan iyo duruufo gabi ahaanba ka duwan , isla markaana waxyaabo fiican ayaanu muujinay intii ciyaarta lagu jiray”.
Virgil Van Dijk oo ka hadlaya halistii ay Chelsea kala kulmeen ayaa yidhi: “Iyagu halis ayay lahaayeen, waxayna heleen laba fursadood oo fiicnaa, laakiin guud ahaan, waxaanu ku faraxsanahay saddexda dhicbood”.
Iyada oo Liverpool ay hadda afar kulan u hadhsan yihiin xili ciyaareedkan Premier league halka ay Man City shan kulan uga hadheen, Virgil Van Dijk ayaa sheegay in kulamada kooxdiisa Liverpool oo kaliya diirada saaryaan.
Van Dijk oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Kaliya waxaanu diirada saarynaa kulamadayada , waxaanu ugu horayn leenahay kulan wayn oo Champions league ah kadib waxaanu u bixi doonaa Cardiff taas oo sidoo kale mid adag ah, sidaa daraadeed waynu arki doonaa”.
Van Dijk oo ka hadlaya farxada kooxdiisu heshay kadib guushii Chelsea ayaa yidhi: “Anigu markasta oo ay kooxdaydu guulaysato waan faraxsanahay, laakiin waxyaabuhu way isbadali karaan, hadda waa sida ay tahay, waxaanu u baahanahay in aanu ku raaxaysano, laakiin arbacada waxaanu leenahay kulan kale oo wayn”.
Van Dijk ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu cad cad ee ku guulaysan kara abaal marinta xidiga sanadka ugu fiican Premier league waxayna isku haystaan Raheem Sterling oo Man City guul ku hogaamiyay.